Macalin Ole Gunnar Solskjær oo ka hadlay kulanka la wada sugayo ee Manchester derby – Gool FM
(Manchester) 06 Mar 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa muujiyay kalsoonida uu ku qabo kooxdiisa kahor kulanka Manchester derby.
Manchester United ayaa Axada ku soo dhaweyn doonto garoonkeeda Old Trafford Kooxda ay dariska yihiin ee Manchester City, si ay u wada ciyaaraan kulan qeyb ka ah kulamada 29-aad ee horyaalka Premier League.
Shabakada “Sky Sports” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay macalin Ole Gunnar Solskjær kahor kulaka Manchester derby, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxay dareemayaan kalsooni markay soo bandhigaan heerar kala duwan kaddib markii ay ku soo guuleysteen garoonka Bernabeu iyo inay ku guuleysteen ​​finalkii koobka Carabao Cup, sidaas darteed waxaan aaminsanahay inay soo bandhigi doonaan qaab ciyaareedkoodii lagu yaqiinay, anaga sidaas oo kale ayaan sameyn doonaa”.
“Waxaan rajeyneynaa in kulankaani uu fiicnaan doono, waxaan rajeynayaa inuu ku dhamaado 3-4 sida aan horeyba u aragnay, waxaa jiray kulamo badan Clásico ah ee inoo dhaxeeyay, waxaanu sameyn doonaa wax kasta oo aan sameyn karno, si kulanka uu u noqdo mid Clásico ah”.
“Dagaalka afarta xarumood ee ugu sareysa horyaalka ayaa sii xoogaysanayay usbuucyadii la soo dhaafay, Man United waxay seddex dhibcood ka hooseysaa Chelsea, halka kooxaha Wolverhampton, Tottenham iyo Sheffield ayaa sidoo kale tartamayaan”.
“Haddii aan 6 dhibcood ka helno kooxaha Manchester City iyo Tottenham, markaas waxay ina siin doontaa fursad aad u wanaagsan” ayuu yiri tababare Ole Gunnar Solskjær.